Epp Antanimbarinandriana : Nahitana “ody gasy” sy lamokan’atody -
AccueilRaharaham-pirenenaEpp Antanimbarinandriana : Nahitana “ody gasy” sy lamokan’atody
21/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena, Vaovao songadina 0
Lasa lavitra ny sotasotan’ny Cua momba ny ady tany etsy Antanimbarinandriana. Tonga hatrany amin’ny fampiasana “ody gasy mihitsy”. Omaly tokony ho tamin’ny 4 ora hariva, raha iny niasa teo amin’ny zaridaina manodidina an’io Epp Antanimbarinandriana io ny mpanao zaridaina iray dia akory ny hagagany nahita tavoahangy kely feno zavatra niaraka tamin’ny lamokan’atody. Avy hatrany dia nampandre ny lehibeny io mpanao zaridaina io ary nisy avy hatrany ny fampahafantarana ity toe-javatra ity tamin’ny mpampahalala vaovao. “ Rehefa nihady teo amin’io zaridaina io izahay dia nahita an’ireo tavoahangy kely feno ody gasy ireo. Ilay lamokan’atody moa dia vaky avy hatrany rehefa voan’ny angady nampiasainay. Ilay tavoahangy kely kosa rehefa novahaina dia sakay sy fanjaitra ary ranon-javatra fotsifotsy no tao anatiny”, hoy andriamatoa Tojo, mpanao zaridaina.
Efa hatrany am-boalohany no namaky ady momba ity ady tany etsy Antanimbarinandriana ity ny Cua. Tsy levon’ny vavoniny mihitsy ny nanaovana Tranomboky ho an’ny mpianatra malagasy eo amin’io Epp io. Efa namoaka vava be tamin’io raharaha io ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ary nihantsy ady an’i Paul Rabary minisitry ny Fanabeazana mihitsy.
Mpianatra ho avin’ny firenena avy ve dia hita andeha hohamosaviana amin’ny fampiasana “ody gasy” ? Mpianatra malagasy izay ho avin’ny firenena. Midika zavatra betsaka mantsy ny “lamokan’atody”. Toa milaza avy hatrany fa mirary ny hampandamoaka ny ho avin’ireo mpianatra ao amin’ity sekoly fanabeazana fototra ity ilay nametraka an’ilay “ody gasy” ? Raha misy ny tsy fifankahazoan’ny Cua amin’ny mpitondra, tokony tsy ho any amin’ny fianaran’ny ankizy tsy manan-tsiny no hanaovany an’izany. Tsiahivina moa fa efa nahatrarana “zavatra” hafahafa tahaka izao teny Ambohitsorohitra tamin’ny andro nialan-dRavalomanana Marc tao ny taona 2009. Tsy nety hiditra an’io lapam-panjakana io mihitsy Rajoelina raha tsy nitondra mpiandry. Dia sanatria ve dia miverina indray ny resaka “osy mainty” sy ny “ody gasy” tamin’izany?